Kuzophekwa uMalema ngemibuzo | Isolezwe
Kuzophekwa uMalema ngemibuzo
Isolezwe / 9 July 2012, 12:17pm /
OWAYENGUMENGAMELI we-ANCYL uMnuz Julius Malema kulindeleke ukuthi ahlangane nezakhamizi zaKwaZulu-Natal nalapho kuzobe kubhungwa khona ngodaba lobuholi ngaphansi kwenkundla ehlelwe yisikhungo sokucobelelana ngolwazi iXubera Institute.
UMnuz Xolani Dube weXubera Institute okuyiyo ememe uMalema uthe inhloso yabo wukuthi abantu bathole ukucaciseleka kulo mholi ngokuthi kanti ngumuntu onjani okufanele aphathe leli zwe.
“Inkinga ekhona ngoMalema ngukuthi zolo lokhu ubegqugquzela abantu ukuthi baseke uMnuz Jacob Zuma ekutheni abe nguMengameli wakuleli, ubephinde afunge agomele ukuthi uyokufa nokufa ngoZuma noma abulale kodwa manje usejikile usethi uyazisola useyamgxeka usembiza ngazo zonke izinto ezimehlisa isithunzi. Yingakho sithathe isinqumo sokuthi simbize azochazela abantu ukuthi hlobo luni lomholi oludingekayo njengoba abantu sebedidekile ngaye ngenxa yokujikela kwakhe abaholi,” kusho uDube.
Uthe kuzokhumbuleka ukuthi noMnuz Thabo Mbeki wayefana neqaqa kuMalema ngesikhathi kuyiwa ePolokwane kodwa manje usembona njengomuntu obalulekile noqotho ebuholini bakuleli yize ayemhlambalaza emthuka.
UDube uthe le nkundla yokucobelelana izoba seGateway, eThekwini, esakhiweni esibizwa ngeLiberty lapho abantu bezokwazi ukubhekana ngqo noMalema bamphonse imibuzo.
Uthe lokhu kuzokwenzeka ekupheleni kwale nyanga ngoJulayi 31.
Lesi sikhungo sivamisile ukumema abantu abahlonishwayo kwezombusazwe nabahlaziyi ukuthi bazocobelelana ngolwazi nezakhamizi ikakhulukazi ezindabeni ezisuke zithinta ngqo umphakathi ezenzeka manje.
UDube uthe bakholwa wukuthi abantu sebeyadinga ukwazi ukuthi uMalema uyinhloboni yomuntu njengoba eguquka zonke izinsuku ngezinkulumo zakhe.
UMalema uxoshwe kuKhongolose ekuqaleni kwalo nyaka ngemuva kokuthi ikomiti lokuqondisa izigwegwe limthole enecala lokudala uqhekeko eqenjini nokusabisa ngokuvukela umbuso waseBotswana .